Menu an'ny renim-pianakaviana isam-bolana
Ny mama sy ny zazakely dia sampana tokana. Izay vehivavy mihinana dia miditra avy hatrany amin'ny vatan'ny zaza, ary tokony hihinana sakafo mihoatra noho ny fanakianana izy. Ahoana no handaminana sakafo iray isam-bolana? Rahoviana ny mampiditra sakafo vaovao ho an'ny sakafo? Fampahafantarana Ny ankamaroan'ny maman-janaka dia manao fahadisoana mitovy - mihinana loatra ...
Menu an'ny renim-pianakaviana isam-bolana Read full »